Iji Okpokoro: ULLER25 mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ịzụrụ gị
Mmiri oyi: arụrụ arụ ma ọ bụ eke?
Disemba 24, 2021
N'agbanyeghị ebe anyị nọ na mbara ala, anyị niile maara snow. Ihe ọzọkwa bụ na oké ifufe ahụ elekọtalarị ya Philomena na anyị ma ọ dịkarịa ala na-ahụ ezigbo mmiri ozuzo otu ugboro na ndụ anyị. Mana anyị na-amatakwa snow na fim, foto, akwụkwọ… anyị maara ya nke ọma! N'agbanyeghị nke ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-enweghị ike ịkọwa otú snowflakes si etolite n'ezie. Ị maara ya? Ma dị ka ajụjụ ahụ, ọtụtụ ndị ọzọ na-ebilite n'ihe gbasara omume ski na ski. mmezi nke snow n'ime ọdụ na egwu. Nke bụ eziokwu bụ na anyị niile ga-amasị ski na snow nke na-ada naanị site na mbara igwe, ma n'isiokwu a, anyị ga-ahụ otú n'ọtụtụ ọnọdụ na-amanye anyị na-amalite na artificial snow. Kedu ihe bụ cannons snow na kedu ka ha si arụ ọrụ? Kedu ihe dị iche n'etiti snow eke na snow wuru? Enwere mmetụta ọ bụla na-emerụ ahụ sitere na mmepụta nke snow wuru? Ajụjụ ndị a na ndị ọzọ bụ ihe anyị ga-atụle n’isiokwu taa.
KEDU KA E SI EME FLAKESOWFLAKE?
N'ụzọ dị ịtụnanya, nke a ihu igwe mmetụta otú kpokọtara Kedu ihe snow na-enyocha site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ gburugburu ụwa. N'ezie, ọ bụ ihe ọmụmụ ma mara dị ka nivology. Ma mba, ọ bụghị amoosu ma ọ bụ echiche efu.
Nhazi nke snowflake nwere mmalite ya na akụkụ kachasị elu nke ígwé ojii. O dila ogologo oge ebe ahu...oyi nke ukwuu! Na mpaghara ikuku a, okpomọkụ dị n'okpuru 0ºC ma, ka o sina dị, ụmụ irighiri mmiri na-abanye undercooling ọnọdụ. Kedu ihe nke ahụ pụtara? N'ụzọ bụ isi, mmiri ahụ na-anọgide n'ọnọdụ mmiri mmiri kama ịtụgharị ghọọ ice, nke bụ ihe na-emekarị na mmiri dị ọcha mgbe ọ ruru 0ºC ma tinye ya na 1atm nke nrụgide.
Ka anyị tinye teknụzụ n'akụkụ… ka na-na na usoro! N'ebe a, anyị ga-enwe, dị ka anyị na-ekwu, mmiri na ọnọdụ mmiri mmiri. Ọfọn ndị a tụlee na-abata kọntaktị na microscopic ahụ (nke nwere ike ịbụ uzuzu, pollen, ma ọ bụ obere ihe ndị ọzọ siri ike), na ifriizi, na-akpụ kristal ice. Kedu udi kristal ahụ? Hexagonal. Nke a dị mkpa iji ghọta geometry nke snowflake, nke a na-anọchi anya ya mgbe niile site na obere ahịrị ndị na-egosi na ọ na-amalite site n'otu ebe ahụ. Ka ọ bụ na ị naghị echeta oge ị na-ese ha n'ụlọ akwụkwọ? N'ihi na eziokwu bụ na ọdịdị ikpeazụ nke snowflake ga-adaba na nke a hexagonal prism, na-eme ka ọ dịghị flake otu dị ka onye ọzọ. E kwuwerị, dabere na iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ na-eme n'ime ígwé ojii, uto na nhazi nke flakes ga-adịgasị iche.
Site na ebe a, flake na-amalite itolite ma na-etolite alaka ya ka ọ na-abanye na kọntaktị na ihe ndị ọzọ microparticles, nakwa n'ihi na-agafe na steeti siri ike nke ikuku mmiri dị na mbara igwe, ebe flake n'onwe ya na-akpụ. Anyị, ndị na-amasị ski ma hụ ọtụtụ snow na ebe dị iche iche, jụrụ onwe anyị ajụjụ ọzọ: olee otú o si kwe omume na e nwere. aesthetically mma flakes Kedu ihe ndị ọzọ? N'ihi na, ka emechara, ọ bụ eziokwu! Enwere ụfọdụ flakes nke ramifications na-fọrọ nke nta sculpted site mmadụ ... Nke a na-eme n'ihi na mmiri vepo na ikuku na-atụgharị ozugbo na ice crystal, na-enyeghị oge maka ihe ọzọ irighiri isonyere na blur ha "ichepụta". N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, prism ahụ hexagonal nke anyị kwuru ga-adị na-ahụ anya karịa, ya mere ọ ga-adị mma karịa.
Ma nke ahụ bụ mgbe ọtụtụ n'ime flakes ndị a na-agbakọta ọnụ, na-eru njupụta zuru oke iji tụọ na agbada, na mmiri ozuzo amalite, ya bụ, ọ na-amalite na snow. Yabụ… ee, ọ nwere ihe anwansi na ya. Mana ọ bụ ezi uche dị ọcha.
Oleekwa ebe anyị na-etinye ndị a maara nke ọma "sleet"N'ihe a niile? A naghị ele ha anya dị ka snowflakes n'ihi na usoro ha na-esite na mmiri ozuzo, mgbe ha na-ajụ oyi kpamkpam ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ mgbe ha na-agafe na mpaghara oyi nke ikuku. Ọ bụ naanị mmiri ghọrọ snow, yabụ ndị na-ahụ maka ihu igwe na-etinye okwu abụọ ahụ ọnụ wee bụrụ okwu ahụ.
Mmiri eyịm ekere eke VS snoo arụrụ arụ
Mmadụ nwere ọchịchọ imegharị ihe okike na-enye anyị n'ụzọ artificially, iji nweta uru ya n'otu ụzọ ahụ, ma na-ezere ịkwụsị ihe onwunwe nke ụwa na-enye anyị. Ka anyị hụ ihe ga-abụ iche n'etiti eke snow na wuru snow.
Ugbu a, anyị na-eji mkpọda ski na-emeghe oge ọ bụla na-enweghị isi. Anyị na-eche: "Ọ bụ oyi, ọ ga-snow na mkpọda ga-kpuchie na snow, n'ezie." Otú ọ dị, ruo n'oge na-adịbeghị anya, ebe ntụrụndụ ski nọ na-efu nke ihu igwe, ya mere emeghe ma ọ bụ na ọ dabere ma snow dara oke ezuru inwe ebe dị mma maka ski, na ihe yiri ka ọ pụtara ìhè, mgbe ahụ, ọ bụghị ihe doro anya.
Enwere ọtụtụ ndị na-akparị okwu ahụ bụ "snow artificial" n'ihi nkọwa ọjọọ nke nke a na-enye echiche ahụ. Ma, na njedebe nke ụbọchị, ọ bụghị ihe ọzọ karịa nghọtahie nke okwu ahụ, ebe ọ bụ na ihe ọ pụtara na-abịa na-ekwu "na mmadụ mere ya." Achọpụtara mmepụta nke snow artificial n'ezie Ohere, mgbe n’afọ ndị 40, otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị Canada nọ na-amụ mmetụta ice na-enwe n’ígwè ụgbọ elu. Iji megharịa ọnọdụ ihu igwe nke ụgbọ elu ndị a na-arụ ọrụ, ha nwalere nnwale a na oke okpomọkụ na iji ọwara ikuku, iji hụ ma ice na-etolite na injin ahụ mgbe ị na-agbanye ya mmiri. Nsonazụ ahụ? Nke ahụ n'akụkụ nke ọzọ nke turbine snow kpụrụ. Cheedị echiche ụdị ihu ndị ọkà mmụta sayensị ga-enwe! N'ịhụ nke a, ha kpebiri ịkwụsị site n'oge ruo n'oge iji wepụsịa snow niile a na-emepụta ma si otú ahụ nwee ike ikpochapụ ụlọ ahụ. A kwenyere na ndị a bụ ntọala maka ụlọ ọrụ America Ụlọ ọrụ Tey Manufacturing Corp ga-ewu nke mbụ snoo egbe dị ka ndị dị otú ahụ, nke anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị na isiokwu a.
GỊNỊ mere ị ga-eji mee ka mmiri snoo arụrụ arụ?
Nke a bụ nnukwu ajụjụ metụtara ihe anyị kwuru na ngalaba gara aga. Anyị na ukwuu eji snow . Na nke a "oke" anyị na-ekwu banyere ọchịchọ anyị iche na oyi akwa nke snow zuru ezu iji snoo ala mkpọda ski, ọ bụghịkwa eziokwu. Ebumnuche nke ebe ntụrụndụ ski, ebe ọ bụ na achọpụtara usoro mmepụta snow, bụ nkwadebe nke mkpọda na ajụjụ tupu mmalite nke oge. Kedu ka esi akwado mkpọda ski? Dị mfe (ọ bụ ezie na aku na uba, ọ bụghị nke ukwuu): ekpuchi ugwu na wuru snow tupu mbụ snowfalls. Site na nke a, a na-enweta ihe abụọ dị oke mkpa. Ị̀ ma ndị ha bụ?
Nke mbụ bụ na a na-emepụta oyi akwa nke snow nke ga-eme ka a isi maka oke mmiri ozuzo eke eke. Ya mere, àgwà ga-adị mma maka ndị na-agba ski na ndị na-agba snow. N'aka nke ọzọ, na nke a mbụ blanketị nke snow, a kara aka ha jikwaa ikewapụ ntakịrị nke climatology nke mpaghara. Ha anaghị adaberekwa nke ukwuu na oge na-amalite na ezigbo snow! Ha ga-enwe ike imeghe ọnụ ụzọ ha na mmiri ozuzo dị nro.
Kedu ka egbe egbe snow si arụ ọrụ n'ezie? Ego ole ka ha na-eri? A na-etinye ha na ebe ntụrụndụ niile ski? Ha na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ihu igwe ọ bụla?
Dị ka anyị napụtara na ngalaba nke gara aga, nchọpụta nke ọma nke mmepụta snow mere ka mmepe nke ihe a na-akpọ. egbe alaMana ọ bụ na mmalite afọ 50 ka etinyere ha n'ebe a na-eme egwuregwu ski. Ọ bụ na United States ebe usoro ndị a na-asụ ụzọ malitere ịgwakọta mmiri na ikuku n'okpuru nrụgide, wee tụba ya n'ikuku nke mere na flakes malitere. Agbanyeghị, nsonaazụ ya yiri nke ahụ bọọlụ ice ya mere àgwà nke snow na mkpọda nke pụta adịghị mma dịka a tụrụ anya ya.
Afọ iri abụọ ka nke ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ America SMI ga-enye ikikere ihe atụ nke snow cannon na mgbanwe kwekọrọ, mgbanwe nke mere ka imewe ahụ bụrụ nke ọhụrụ na nke ọma. Otú ọ dị, egbe ndị a dabere na okpomọkụ ụlọ maka nhazi nke flakes, nke a na-eduga anyị iji dozie ajụjụ na-esonụ nke ga-ebilite n'ezie: Ị nwere ike itinye egbe snow n'ụdị ọnọdụ ihu igwe ọ bụla? Azịza ya bụ mba. Ka anyị hụ ihe kpatara ya.
Ihe nlereanya a nke egbe egbe, nke a maara ugbu a dị ka obere agba egbe Ọ bụ otu ihe ahụ nke a ka na-eji taa na ọdụ ụgbọ mmiri (nwere ntakịrị mgbanwe) na ị ga-amakwa ka esi amata ya na nlele. Dị ka anyị kwuru, ha na-adabere na okpomọkụ dị n'èzí maka ịmepụta flakes, ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ site na ịmalite obere irighiri mmiri ndị na-abịa na kọntaktị akpụrụ isi eme na ihe a na-akpọ ngwa agha nuklia. Ya bụ, okpomọkụ kwesịrị ekwesị ga-enwe ike ime ka njikọ a dị n'etiti mmiri na ice ice. Ma kpachara anya, anyị anaghị ekwu banyere ọnọdụ okpomọkụ! Anyị na-ekwu maka okpomọkụ iru mmiri. Gịnị bụ mmiri okpomọkụ? Ọ bụ okpomọkụ kachasị elu nke ikuku nwere ike iru naanị site na evaporation na, ya mere, dabere na ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke ikuku. Okpomọkụ iru mmiri nke egbe ala ga-achọ maka mmepụta snow ga-adị n'okpuru -2,5ºC, yabụ ugbu a ị ghọtara ihe kpatara na enwere oge mgbe enweghị ike iji egbe ndị a? Ọ bụghị na oge anaghị achọ, mana nke ahụ, ọ bụ ezie na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 0ºC, ma ọ bụrụ na okpomọkụ iru mmiri adịghị agbagharị gburugburu -2,5ºC ozugbo, ọ gaghị ekwe omume.
Otu ndị a obere mkpọ egbe abụghị ndị ị hụrụ anụ ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri. Ikekwe, n'ụzọ megidere, ị hụla ndị a maara dị ka ube snow. Ha na-ada ka ị maara nke ọma? A na-ahazi ha n'akụkụ egwu egwu ahụ ma nwee nnukwu ịdị elu n'ihi na ha enweghị onye na-akwado ya, dịka ha nwere ndị na-agbanye nrụgide dị ala. Ma ha na-arụkwa ọrụ n'otu ụzọ ahụ!
MMETỤTA Gburugburu Ebe Obibi nke Ụjọ Ụjọ arụrụ arụ
Dị ka ndị skiers, n'agbanyeghị ọkwa onye ọ bụla n'ime anyị nwere, anyị chọrọ snow iji mee egwuregwu a. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na usoro mmepụta nke snow na-emepụta ihe, ọtụtụ ndị ọkà mmụta ihe ndị dị ndụ na-ahụ maka imeghe arụmụka nke ma eleghị anya bịakwara n'uche mgbe ị na-agụ akụkọ a: gịnị bụ mmetụta gburugburu ebe obibi nke mmepụta snow artificial?
Dị ka anyị hụworo, mmepụta snow na-elekwasị anya na canyons. Ngwa ndị a na-arụ ọrụ site na isi mmalite abụọ: eletrik, ya mere, ha ga-enwe akara ukwu carbon ha kwekọrọ; Y mmiri. Ị ga-eche, sị: “Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, ógbè ndị bụ́ ugwu ugwu na Spen abụghị ebe mmiri na-adịghị! Ma ọ bụ eziokwu, ma ịmepụta mmiri mmiri nwere ike gbanwee gburugburu ebe obibi nke mpaghara ahụ, na nke ahụ bụ ebe ndị ọkà mmụta ihe ndị dị ndụ na-etinye uche. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ịmara na mmụba nke okpomọkụ dị ka oge ski na-agwụ, na-eme ka mmiri ahụ laghachi n'okirikiri okike ya.
Nke nta nke nta, ụlọ ọrụ niile na-atụgharị n'ịchọ ihe ngwọta maka mgbanwe ihu igwe nke n'ihi iji ihe okike anyị na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, na mpaghara snow agaghị adị ntakịrị. Enwere ọtụtụ ihe ịma aka nke ụwa na, dị ka ụmụ mmadụ, anyị na-ahụ maka ihu ha ihu. Ihe dị mkpa, nke mbụ, bụ ịkụziri ndị mmadụ ihe ka, n'ókè ma ọ bụ karịa, anyị niile nwere ike ime ntakịrị ihe anyị ma ọ bụ ... kama: obere snowflake anyị.
Kedu ka mmiri ozuzo si aga?
Snow bụ mmetụta ihu igwe nke na-ada n'ụdị mmiri ozuzo snowflake. Ọkpụkpụ snoo na-esite n'akụkụ elu igwe ojii, ebe okpomọkụ dị ntakịrị ma na-etolite prisms hexagonal. Site n'ebe ahụ, ha na-abanye na kọntaktị na microparticles, dị ka uzuzu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, na flake na-eto eto ma na-abawanye na nha ruo mgbe ọ nwere oke ibu iji malite ịrịda. Ọnọdụ nke usoro a na-eme bụ kpọmkwem ndị a na-agbalị ka a gbanwee ya na usoro mmepụta snow iji nweta otu ihe ahụ ma mee ka oge a ghara ịdabere na ma snow ọ na-ada ma ọ bụ na ọ bụghị.
GỊNỊ bụ Ọdịiche dị n'etiti mmiri oyi ekere eke na snoo arụrụ arụ?
Ihe dị iche n'etiti snow eke na snow artificial bụ usoro nhazi ha. A na-emepụta snow sitere n'okike n'onwe ya, ebe snow artificial na-anwa imepụtaghachi otu ọnọdụ ahụ, ụfọdụ canyons nwere ihe ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-ekesa ihe mmiri. A na-ahazi ihe ndị a na mkpọda ski nke ebe ntụrụndụ iji kwe nkwa ịdị mma nke elu ma, n'ụzọ dị otú a, na-enyere okike aka ịmepụta ọnọdụ kachasị mma maka onye na-agba ọsọ.
KEDU KA E SI EME ESINOW AKA AKA?
A na-emepụta snow artificial site na snow cannons nwere usoro na-eme ihe na mmiri na nrụgide. A na-elekwasịkarị anya n'ojiji ya na mkpọda ski, karịsịa n'oge oge nkwadebe nke mbara ala, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ihe ndabere maka ihe ndị ọzọ na-adaba na snow na-eme n'oge. N'aka nke ọzọ, ọ na-enyekwa aka na-edozi egwu egwu, ọ bụ ya mere na ha maara gị nke ọma.
Enwere mmiri mmiri arụrụ arụ na mkpọda sKI niile?
Ọbụghị na ọ bụ ezie na ọ dị mwute ikwu, mgbanwe ihu igwe amanyela ndị njikwa na ndị na-ahazi ọdụ ọdụ ka ha chee echiche banyere ihe ngwọta maka ụkọ snow, ma ọ bụ àgwà mediocre nke na-esite na ịdabere naanị na ha. Iji snow eme ihe dị ka ihe “mgbakwunye” na mkpọda ga-ekwe nkwa mmeghe ya na oge kwekọrọ, na Spain ekpuchilarị ihe karịrị ọkara nke mkpọda nke ebe egwuregwu ski.
Ihe ndị ọzọ: Ihe omuma na ihe omuma
Laghachi na akụkọ
Mkpụrụ Obi Black / Nwa
Nye ọnụahịa8500 € 85.00 € Ụdị oge 16500 € 165.00 € Ị na-echekwa € 80
Ndagwurugwu Blue Tortoise / Black
Nye ọnụahịa6900 € 69.00 € Ụdị oge 15500 € 155.00 € Ị na-echekwa € 86
Ndagwurugwu Black / Blue
Nye ọnụahịa7900 € 79.00 € Ụdị oge 15500 € 155.00 € Ị na-echekwa € 76
Avalanche Blue / Nwa
Nye ọnụahịa14000 € 140.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 85
Hookipa Green Tortoise / Nwa
Nye ọnụahịa7400 € 74.00 € Ụdị oge 19500 € 195.00 € Ị na-echekwa € 121
Mkpụrụ Obi Brown Tortoise / Blue
Nye ọnụahịa9900 € 99.00 € Ụdị oge 16500 € 165.00 € Ị na-echekwa € 66
Blizzard Nwa / Black
Nye ọnụahịa8400 € 84.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 36
Nkume Red / Blue
Nye ọnụahịa5900 € 59.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 61
Oké Ifufe Blue / odo
Nye ọnụahịa6900 € 69.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 51
Ndagwurugwu Green Tortoise / Nwa
Oke Oke Oke Ozo
Nye ọnụahịa16800 € 168.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 57
Oké Ifufe Black / udara
Mgbidi Blue / Red
Nye ọnụahịa12500 € 125.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 100